Nampandrenesina ny programa AEC Next sy SPAR 3D 2019 Conference - Geofumadas
March, 2019 jeospatial - GIS, Engineering, fanavaozana
Nambara ny mpandahateny 100 nandritra ny fihaonambe, anisan'izany ny fampisehoana vaovao avy amin'ny National Geographic sy IBM.
28 March 2019 (Anaheim, Kalifornia, Etazonia) - Ireo mpikarakara momba ny AEC Next Expo + Technology Conference y SPAR 3D Expo & Fihaonambe, nifantoka tamin'ny teknolojia ho an'ny tontolon'ny fampiroboroboana teknolojia sy ara-barotra ao amin'ny 3D, ny sehatra fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra dia nanambara ny Ny fandaharan'asan'ny fihaonam izay ahitana mpandahateny telo hafa anio.
Wednesday, May 22, niaraka Mimi Aung, NASA JPL, Dr. Robert S. Sutor, IBM Vice-Président ny Strategy sy ny Tontolo Iainana Q, IBM tamin'ny famelabelarana mitondra ny lohateny hoe Quantum Computing: fomba fijery ny hoavy. Jon Snoddy avy any Disney Imagering ny Alakamisy 23rd dia fihaonambe niarahana tamin'i Fredrik Hiebert, mpikambana ao amin'ny National Geographic, ary Kathryn Keane, filoha lefitry ny fandaharana ho an'ny daholobe ary talen'ny National Geographic Museum miaraka amin'ny fampisehoana natolotr'izy ireo Teknolojia Virtual 3D ho an'ireo traikefa momba ny arkeology.
"Faly izahay manambara ny fanampim-panazavana farany momba ny Keynote," hoy i Linda McLaughlin, Talen'ny Programme Conference, Diversified Communities. “Mahaliana antsika rehetra ny fanovana entin'ny computing kuantum sy ny fanamby sarotra atrehin'ity famelabelaran-kevitra nataon'i Robert ity. Ary manantena ny hijeren'i Fredrik sy i Kathryn ny fahafaha-mampiasa teknolojia hizarana harena arkeolojika manerantany.
Ireo dimy hafa mpandahateny miavaka hafa dia hiaraka amin'ny hafa avy amin'ireo mpitarika 100 amin'ny teknolojia vaovao. Ny fandaharan'asan'ny AEC Next and SPAR 3D dia manolotra fandaharam-pampianarana ara-teknika manokana samirery, ary miara-miasa mba hahazoana ireo fanampiana ara-bola. Ny fandaharam-potoan'ny fihaonambe dia manomboka amin'ny fivoaran'ny vokatra amin'ny Talata maraina 21 amin'ny volana Mey ary mitohy mandritra ny telo andro feno. Ny fandaharana manontolo dia azo jerena eto https://www.spar3d.com/event/full-conference/
«Faly izahay amin'ny fandaharam-potoana AEC Next: maneho teknolojia isan-karazany mandroso amin'ny indostrian'ny AEC. Ny zava-drehetra rehetra avy amin'ny AR / VR ary ny blockchain hatramin'ny fivoaran'ny 'fomba nentim-paharazana' sy ny fomba fananganana dia nitazona ny lohahevitra, "hoy i Bill Emison, Filohan'ny Kaonferansa, Diversified Communications. "Mifantoka amin'ny fanomezana tantaram-pahombiazan'ny mpanjifa amin'ny mpitarika AEC izahay izay ahafahan'ny mpanatrika hahatakatra ny fiantraikan'ny teknolojia mipoitra amin'ny indostria rehetra."
Raha niresaka momba ny programa SPAR 3D Conference dia nanampy i Rt. McLaughlin hoe: "Tena faly aho amin'ny fivoriana Integrated Project Delivery (IPD) izay vaovao amin'ny SPAR 3D amin'ity taona ity. Ireo fivoriana ireo dia mifantoka amin'ny fampidirana ireo fitaovana sy arofanina ho an'ny tetikasa manokana toy ny LAX, Caltrans ary Giant Mines. Ireo mpilalao sarimihetsika lehibe mandritra ny rojika vidy, avy amin'ny tompona fananana mankany amin'ireo mpifaninana, no hamaritra ny fivezivezena rehetra avy amin'ny fanombanana ny fepetra toy ny amin'ny fanodinana sy ny vokatra, ny fitaovana ary rindrambaiko ampiasaina, ny fampidirana ireo takelaka miparitaka, famindrana angon-tsofina, haitao vaovao sy tontolon'ny fahitana AR / VR vaovao, ary koa tombontsoa mifameno amin'ny fampiasana teknolojia 3D «.
Misokatra izao ny fisoratana anarana amin'ny AEC Next Technology Expo + Conference ary ny SPAR 3D Expo & Conference. Ireo mpikarakara hetsika dia manoro hevitra ireo matihanina teknolojia AEC sy 3D hisoratra anarana mialoha mba hahazoana ny vidiny tsara indrindra sy hisorohana ny tsipika eny an-toerana. Ny mpisoratana anarana dia afaka misoratra anarana na amin'ny fihaonambe na fivoriana hanatrehana famelabelaran-kevitra miaraka amin'ireo fandaharam-potoana nofinidin'ny kaonferansa, na afaka misafidy ny hisoratra anarana amin'ny All Access Pass izy ireo hiditra amin'ny fotoam-pivoriana rehetra. fandaharana. Hisoratra anarana amin'ny fitsidihana https://xpressreg.net/register/aesp0519/landing.asp?sc=207793.
Momba ny AEC Next sy ny SPAR 3D Co-Location
Ny AEC Next Technology Expo + Conference dia hifanandrify amin'ny fotoana sy ny fotoana miaraka amin'ny SPAR 3D Expo sy ny Fihaonambe 2019 ho an'ny taom-piasana faharoa. Miaraka amin'ireo hetsika ireo dia hanolotra mpitarika ny filoha manerantany amin'ny programa roa samihafa. Ny fampiratiana dia ho tafiditra ao amin'ny efitrano fivarotam-piofanana lehibe ho an'ny mpamatsy, izay ahafahan'ny mpandray anjara feno amin'ny mpivarotra rehetra. Ny hetsika amin'ny tambajotra sy ny seho an-tserasera dia mety ho an'ny mpanatrika rehetra ihany koa. Ireo mpifindra monina dia afaka mandalo ny fihaonan'ny AEC Next na ny SPAR 3D na ny dingana All Access hanatrika fihaonambe.
Momba ny AEC Next Technology Expo + Conference
Ny AEC Next Technology Expo + Conference dia fihaonambe iraisam-pirenena momba ny serivisy sy ny atsy tsy an-kiato ho an'ny mpamatsy any North American izay mifantoka amin'ny fampiharana sy ny fampidirana ny teknolojia manerantany izay misy ny tontolon'ny tetikasa manontolo. Ny mpandraharaha dia manolotra fitaovana, rindrambaiko sy serivisy, teknolojia vaovao ary fananganana / fananganana fananganana fananganana fandaharanasa fanofanana. Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba www.aecnext.com.
Momba ny SPAR 3D Expo & Conference
SPAR 3D Expo & Conference no hetsika iraisam-pirenena mitarika ho an'ny fampiharana ara-barotra ny teknolojia 3D mifantoka amin'ny fitaovan'ny 3D sensing, 3D processing ary 3D visualization. Manomboka amin'ny detection miaraka amin'ny drôna, sehatra finday ary fitaovana azo ampiasaina ka hatramin'ny fampiasana zava-misy marobe, zava-misy virtoaly ary fitaovana fanaovana sary an-tsary zava-misy, ny zava-drehetra ao amin'ny 3D dia eto, amin'ny tsena tsy miankina sy mpivarotra tsy miandany. Mianara bebe kokoa amin'ny www.spar3d.com/event.
Momba ny Fifampiraharahana Diversified
Communications maro samihafa no haino aman-jery iraisam-pirenena mpitarika orinasa amin'ny portfolio-ny fampirantiana sy ny fihaonambe ao amin'ny olona, ​​sy vondrom-piarahamonina an-tserasera dizitaly sy pirinty boky sy gazety. Amin'ny maha mpamokatra ireo tsena-mitondra vokatra, mampifandray Fifandraisana maro samihafa, manabe sy manome hery raharaham-barotra ao amin'ny vondrom-piarahamonina bebe kokoa noho 14 orinasa, anisan'izany ny sakafo sy zava-pisotro, fahasalamana, ara-boajanahary sy organika, raharaham-barotra sy ny fitantanana ny teknolojia. Tafapetraka ao 1949 sy ny foibeny any Portland, Maine, Etazonia. UU. Raha amin'ny fisarahana sy ny birao maneran-tany, dia mbola maro samihafa Fifandraisana orinasa tsy miankina, fahatelo-taranaka fianakaviana-tompony. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.divcom.com.
Jason Lavigne, Fifampizaràna samihafa
Previous Post«Previous Ny valim-pifidianana an'ny Global Geospatial World 2019 dia nambara ary hoentina any amin'ny GWF
Next Post Tonga ny fotoana: #GeospatialByDefault; midira ao amin'ny GWF 2019 any Amsterdammanaraka »